Reer Binu Israaʼiil Baa Galay Dalkii loo Ballanqaaday | Farriinta Kitaabka
Reer Binu Israaʼiil Baa Kancaan Soo Galay
Yashuuca baa reer binu Israaʼiil ku hoggaamiyay inay Kancaan qabsadaan. Yehowah baa xaakinnadii xoogeeyay siday dadkiisa dulmi uga samatabbixiyaan
YEHOWAH dalka Kancaan wuxuu u ballanqaaday farcankii Ibraahim qarniyo kahor intaynan reer binu Israaʼiil dalkaas soo galin. Waqtigii wuu yimid uu Yashuuca reer binu Israaʼiil ku hoggaamin lahaa inay hantiyaan Dalkii loo Ballanqaaday.
Ilaahay reer Kancaan wuxuu ku xukumay inay baabbiʼis istaahil ku yihiin. Dhulkii way nijaaseeyeen. Waxay aad ku dulleeyeen sino iyo dhiig qub. Saas awgeed waxay ahayd inay reer binu Israaʼiil wada baabbiʼiyaan magaalooyinkii reer Kancaan oo ay qabsan lahaayeen.
Haddaba intaynan dalka gelin Yashuuca wuxuu u diray laba nin oo basaasyo ah. Labadaas nin markay Yerixoo gaareen waxay ku degeen xaafaddii naag Raxab la dhaho. Inkastoo ay naagtani ogayd inay nimankan ka dhasheen reer binu Israaʼiil gurigeeday ku soo dhoweysay wayna ilaalisay. Raxab way aammintay Ilaaha reer binu Israaʼiil sababtoo ah waxay maqashay siduu Yehowah dadkiisii u badbaadiyay. Basaasyadii waxay ku dhaarisay in iyada iyo reerkeedaba la badbaadiyo.
Dabadeed reer binu Israaʼiil Kancaan way soo galeen oo waxay weerareen Yerixoo. Yehowahna si mucjiso leh buu u soo dumiyay derbiyadii magaaladii. Markaasna Yashuuca iyo ciidankiisiiba dhaqsi bay u soo galeen oo u baabbiʼiyeen Yerixoo. Laakiinse way badbaadiyeen Raxab iyo reerkeedii. Yashuuca iyo ciidankiisii si dhaqsi ah bay lix sano u qabsadeen qaybo waaweyn oo ka tirsanaa Dalkii loo Ballanqaaday. Markaas kaddib dhulkii waxaa loo qaybiyay qabiilladii reer binu Israaʼiil.
Markii la soo gaaray dhammaadkii Yashuuca adeegiduu Ilaahay u qabanayay dadkii oo dhan buu iskugu yeeray. Wuxuu dib ula eegay shuqulladii uu Yehowah awowayaashoodii u sameeyay. Wuxuuna ku guubaabiyay inay Yehowah u adeegaan. Haddaba markii Yashuuca iyo odayaashii la shaqeynayay ay dhinteen reer binu Israaʼiil Yehowah way ka tegeen oo ilaahyo been ah bay u adeegeen. Muddo leʼeg 300 oo sano qarankaas sharciyada Yehowah si joogto ah u ma adeecin. Waqtigaas gudihiisa Yehowah wuxuu oggolaaday in cadowyo sida reer Falastiin oo kale ay cadaadiyaan reer binu Israaʼiil. Laakiin markay reer binu Israaʼiil Yehowah caawimaad ugu qayshadeen wuxuu u kiciyay xaakinno badbaadiyo. Dhammaantood waxay ahaayeen 12 xaakin.
Xaakinkii ugu horreeyay wuxuu ahaa Cotniiʼeel kii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa Samsoon ninka dunida ugu xoog weyn. Xilliyadaas buugga Xaakinnada baa ka sheekeeyo. Buuggan xiisaha leh waxaa ku qoran muxuu inoo muujiyaa? Runta weyn oo ay inoogu soo celceliso waa in adeecidda Yehowah barako ka timaaddo oo markii la adeecinna ay belaayo keento.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Yashuuca, Xaakinnada, iyo Laawiyiintii 18:24, 25.
Yehowah muxuu Raxab iyo reerkeedii u badbaadiyay?
Markuu Yashuuca dhintay maxay reer binu Israaʼiil sameeyeen?
Buugga Xaakinnada runtee weyn buu inoo muujiyaa?
Wadaag Wadaag Reer Binu Israaʼiil Baa Kancaan Soo Galay